I-Patreon-crowdfunding, indlela yokufumana imali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Siza kuqala ngokuchaza,yintoni patreon? Kwaye ngulo Patreon liqonga exhasa abantu abanomdla kunye nomsebenzi wokudala ubugcisa, iimveliso, iinkonzo, njl. kwaye ngawo Iindibano zifunyenwe ukuxhasa ngezimali umdali, ezi nethiwekhi zibizwa ngokuba "Ukuphithizela".
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze I-Patreon okanye amaqonga ahamba nabantu, ezo zixhasa ngemali kuphela iiprojekthi ezinkulu de zibe zigqityiwe kunye nezo zenzela ukuba umdali afumane imirhumo yenyanga ukuxhasa indalo rhoqo ngokunika into njengembuyekezo.
1 Usebenza njani uPatreon?
1.1 IProfayili yabadali
1.2 Umxhasi okanye umphathi
Usebenza njani uPatreon?
U-Patreon uhamba phantsi kweeprofayili ezimbini, iprofayile yabadali kunye nabaxhasi.
Ihlabathi labadali lahlulahlulwe laba: ababhali, iimvumi, i-YouTubers, iikhathuni kunye nemifanekiso, edla ngokuba nenani labalandeli, kodwa kukho into engekhoyo ukubanceda baqhubele phambili kwaye imeko yezoqoqosho inokuba yile nto, ke ngoku uPatreon ungena kumdlalo, kwaye kulapho umdali ubhalisela iqonga, Injongo yoku kukufumana imali kubalandeli bayo kwaye ke bakwazi ukuqhubeka nokudala.
ukuba Abadali beqonga lePatreonKuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Yenza iakhawunti yakho eqongeni kwaye ukhethe ukuba uyafuna na ukuba ingeniso ibe yenyanga okanye yendalo nganye.
Kufuneka yenziwe iposti apho abalandeli kunye nabaxhasi abanokuthi bacaciswe ukuba yintoni na into ekhethekileyo, zeziphi iintlobo zomsebenzi oza kuzenza kwaye uza kusebenza njani kwiqonga lePatreon, ukuba yinyanga nganye, ngeveki, njl.
Nika inkuthazo kubaxhasi, umzekelo, nge igalelo elongezelelweyo ngenyanga yee-euro ezininzi, uya kuba nokufikelela ukuze ubone umsebenzi kwisiketshi kwaye ubeke izimvo kuwo. Inkuthazo kufuneka ihambelane nexabiso lemali, ngoko ke xa inyusa igalelo, kokukhona umvuzo kunye nemilinganiselo kufuneka incitshisiwe, umntu makangayekethisi kwinto engazukuthobela.
Iinjongo ekufuneka zifezekisiwe ikwayinto ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo, umzekelo, inokumiliselwa ukuba ukuba uyakwazi ukuqokelela imali phakathi kwabaxhasi bakho ngemali ethile ngenyanga, yonwabele imathiriyeli yakho kwinyanga elandelayo, ukususa nayiphi na imiqobo okanye ukongeza into eyonwabisayo kubaxhasi.
Umxhasi okanye umphathi
Ngabantu abathi bonelela ngenkxaso yemali kubadali, bafuduswa ngezizathu ezahlukeneyo kwaye ngubani oza kuhlala efumana into njengembuyekezo; Ngapha koko, umdali kufuneka asete uthotho lweenkuthazo ezijolise kubaxhasi bakhe ezibandakanya izixa ezithile zemali, ngelixa lukhulu igalelo lezemali, kokukhona inkuthazo ibangcono.
Ukuze ube ngumxhasi, unetyala kuwe bhalisa kwiqonga lePatreon, uphonononge iimeko zemirhumo ezibekiweyo kwaye wenze igalelo lemali ngokukunceda, nkqu negalelo linokwenziwa ngamakhadi akho okanye ngePayPal.
Oku kuhle kakhulu iqonga eligama linguPatreon Ijika ibe yinkxaso enkulu kuye nakubani na ongumyili wemizobo ngokwakhe, ongumsebenzisi onobuchule kwiwebhu notyala ixesha elininzi kunye nobuchule bokuthumela umxholo onwabela ukwamkelwa kwabaphulaphuli abathile, kodwa eli xesha kunye nomzamo uvuzwa ngokufanelekileyo ngokuthetha ngemali.
Iqonga elinje likunika ithuba lokutshintsha loo mhlaba xa ubeka ezandleni zakho iindlela ezifanelekileyo, okokuqala ukuze umsebenzi wakho upapashwe, emva koko abantu abebelandela umsebenzi wakho wokuyila nabanethuba lokufaka imali kumdali wabo abathandayo kwaye ekugqibeleni banenkuthazo kunye nezixhobo eziyimfuneko zokuqhubeka nokuvelisa kunye nokugcina ubomi babo besenza ntoni uyathanda ukwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » I-Patreon-crowdfunding, indlela yokufumana imali